Dacwad lagu soo oogay sii-haayaha Wasiirka Maaliyada Soomaaliya
MUQDISHO, Soomaaliya - Dacwad heer Maamul ayaa lagu soo oogay Wasiirka Maaliyadda Xukuumaddii la riday C/raxmaan Ducaalle Beyle, waxaana kiiskiisa loo gudbin doonaa Maxkamadda sare ee dalka.
Ururka Qareenadda Soomaaliyeed ayaa sheegay in Beyle uu soo saarey warqad aan sharci ahayn 20-kii bishan, taasoo uu ku shaaciyay in lacag laga qaadi doonaa qareen walba iyo dadka ay u doodayaan, ee dacwadda ka furanaya Maxkamadaha.
Abukaate Cali Xalane, oo afhayeen u ah Ururka Qareenadda ayaa ku tilmaamay nidaamka ajuuradda Maxkamadaha ee uu soo saarey Beyle uusan sharci ahayn, maadama laga rabey inay soo saarto Wasaaradda Garsoor, lana marsiiyo Gollaha Wasiiradda iyo Baarlamanka.
Afhayeenka ayaa xusay inay Dacwad maamul ay ka gudbinayaan sii haya Wasiirka Maaliyadda iyo warqadda uu soo saarey, isagoo hoosta ka xariiqay in qorshahan uu yahay mid albaabada u furayo musuq-maasuq inuu ka dhaco qeybta Garsoorka dalka.
Qareennada waxaa lagu soo rogay inay sameystaan aqoonsi ama ruqsad, iyagoo bixinaya $500, waxaana lagu cusbooneysiinayaa sanad walba $300, waxaa intaasi dheer in dacwadda Madaniga ah qofkii furanaya laga rabo $200.
HALKAN HOOSE KA AKHRI WARQADDA BEYLE:
Wasiirka maaliyadda Xukuumadda C/raxmaan Ducaalle Beyle ayaa ka warbixiyay kulanka.
Lacagta ay Soomaaliya "u baahan tahay" si ay ula tacaasho COVID—19
Soomaliya 26.03.2020. 13:39
DF oo ka hadashay ciidan la sheegay in ay dul-dhigtay guriga Shariif
Soomaliya 24.03.2020. 15:50
Kaamirooyinka qarsoon ee jidadka Muqdisho oo mar kale la qarxiyey
Soomaliya 19.03.2020. 08:18
Baarlamaanka Soomaaliya oo go'aan kasoo saarey maqaamka Muqdisho
Soomaliya 23.02.2020. 16:00
Farmaajo oo saxiixay sharciga lagu muransan yahay ee doorashooyinka
Soomaliya 21.02.2020. 00:41